Imizila yamazwe omhlaba ye-ICE ifaka neFrance, Belgium, Denmark, Austria, abase Netherlands, naseSwitzerland.
I-Intercity-Express noma ngegama layo lesinqamuleli ICE uhlelo lwe izitimela ngesivinini ephethwe yiDeutsche Bahn, Umhlinzeki wesitimela kazwelonke waseJalimane. I Izitimela ze-ICE are known for luxury, isivinini, futhi baduduze njengoba bexhumanisa yonke idolobha eJalimane.
Imizila Yokuhamba ye-ICE akhawulelwe eJalimane kuphela. Isitimela sihamba emizileni yamazwe omhlaba eya e-Austria, France, Belgium, Switzerland, Denmark, kanye neNetherlands.
Ukuqiniseka ngohambo lwakho nangedethi yokuhamba kuzokongela imali emalini ebuyiselwe. Izinga lembuyiselo nenketho yokubuyisa amathikithi e-ICE angasetshenzisiwe kuncike ohlotsheni lwethikithi olithengayo. Futhi, imali yokubuyiselwa imali iphansi kumathikithi okugibela imali engu-saver kunamathikithi ajwayelekile okugibela. Qaphela ukuthi i-DB ngeke ikubuyisele imali uma ubuyisa ithikithi lakho. Ukubuyiselwa kwemali kwe-DB kwenziwa ngamavawusha we-DB, ongayisebenzisa ukukhokhela noma iyiphi insizakalo abayinikezayo. Ungathengisa futhi i- Amathikithi wesitimela e-ICE online on internet forums if you wish to get the money back.
Amathikithi e-ICE ashibhile ezikhathini ze-off-Peak (NgoLwesibili, NgoLwesithathu, Ngolwesine, nangoMgqibelo). Ngesikhathi sezinsuku eziphezulu, amathikithi ashibhile athengiswa ngokushesha okukhulu, kusale amathikithi weFlexpreis kuphela. Ukuhamba ngezinsuku ze-Peak, bhuka kusengaphambili ukuze uthole amathikithi wokugibela. Uma ungakwazi ukuthola amathikithi okuhamba konga, qiniseka ukuhamba phakathi kokusa ekuseni nantambama (ngenxa yabahamba ngebhizinisi) njengoba amathikithi e-Flexpreis abe eshibhile ngaleso sikhathi. Okokugcina, gwema ukuhamba phambili esidlangalaleni and school holidays njengoba amanani amathikithi e-ICE nawo azokwenyuka.
Intengo yethikithi le-ICE kuya ngohlobo lwethikithi kanye nesigaba sezihlalo osifunayo. ngokuvamile, ujantshi German is famous for its low ICE ticket prices. Kunezinhlobo ezintathu zamathikithi wesitimela se-ICE - ithikithi elijwayelekile noma leFlexpreis, amathikithi okugibela iSupersaver noma iSupersparpreis, kanye nokugibela imali okusindisa noma amathikithi eSparpreis ICE. Amathikithi okugibela ashibhile kunamathikithi ajwayelekile, kodwa amathikithi atholakalayo anciphisa njengoba usuku lokuhamba lusondela. Amanani amathikithi e-ICE kuya ngesigaba osikhethile futhi nansi itafula lokufingqa lamanani aphakathi neklasi ngalinye:
1) Gwema Izinqubo Zangaphambi Kokugibela. Uma indiza nge 9 am, ungcono ukuba sesikhumulweni sezindiza okungenani ngo 7 ngenxa yalokho ngesikhathi obe kufanele ngabe usudlule kuzinqubo zangaphambi kokugibela nokuhlolwa kokuphepha, sekuzoba isikhathi sokuba ugibele indiza.
Njengoba iphathelene namathikithi kanye nezindawo eziklasini esitimeleni se-ICE, noma yiluphi uhlobo lwamathikithi lube sesigabeni sokuqala. This means that even the amathikithi esitimela eshibhile e-ICE, inani lokusindisa, futhi iSuper sparpreis ingakwazi ukukhokhela izihlalo ezihamba phambili. Nokho, inani liyahlukahluka kuwo womabili amakilasi, njengoba kuboniswe ngenhla.
ICE offers rail passes at cheap ICE Train prices zokuhamba okungenamkhawulo kulo lonke elaseJalimane noma eYurophu. Kunezinhlobo ezintathu zokudlula kojantshi:
Abanikazi bokudlula kwesitimela bangavakashela izindawo ezithile zamabhonasi ngaphandle kweJalimane (Salzburg, Venice, futhi Brussels)
Ukudlula kwe-Eurail kuvumela abantu abangewona ama-Europe abahlala ngaphandle kweRussia, Europe, kanye neTurkey yokuhamba ngokunqunyelwe eYurophu. Ezinye izinzuzo zifaka phakathi:
Discounts on Amathikithi wesitimela e-ICE okwabantu abasha nabadala.
Amashejuli wesitimela awalungiselelwe, okwenza kube nzima ukuphendula. Nokho, ungakwazi ukufinyelela amashejuli wesitimela se-ICE ngesikhathi sangempela ekhasini eliyisiqalo le-Save A Train. Faka imvelaphi yakho nendawo oya kuyo futhi uthole ukufinyelela ngokushesha kuwo wonke amashejuli wesitimela se-ICE. Isitimela sokuqala se-ICE sihamba 6 am, nezitimela zishiya yonke 30 imizuzu eya ezindaweni ezinkulu.
I-ICE ngokuyinhloko idlula kuyo yonke imizi eJalimane. Kukhona amanye amazwe omhlaba ICE travel routes kwamanye amazwe asemngceleni weJalimane.